Netizen Report: Tambajotra Voabahana Any Avaratra Atsinanan’i India Ao Anaty Fitroaram-bahoaka. · Global Voices teny Malagasy
Netizen Report: Tambajotra Voabahana Any Avaratra Atsinanan'i India Ao Anaty Fitroaram-bahoaka.
MpanoratraNetizen Report Team
Voadika ny 02 Oktobra 2015 5:19 GMT
Lalambe ao anatin'ny alina any Imphal, tanàna renivohitr'i Manipur. Sary avy tamin'i PP Yoonus tao amin'ny Wikimedia (CC BY-SA 3.0)
Manolotra topimaso iraisam-pirenena momba ireo fanamby fandresena, ary fironana vao mipoitra momba ireo zo amin'ny Aterineto manerana ny tany ny Netizen Repport an'ny Global Voices Advocacy.
Nobahanan‘ny governemanta Indiana ny fahazoana miditra amin'ny Aterineto sy ny tolotra fandefasana hafatra an-tsoratra tany amin'ny faritra sasany any amin'ny fanjakana avaratra atsinanan'i Manipur, taorian'ny hetsi-panoherana feno herisetra izay niteraka fahafatesan'olona valo. Nanomboka ilay hetsi-panoherana taorian'ny nandanian'ny governemantam-panjakana lalàna maro izay milaza hoe iza no afaka milaza ny tenany ho mponina ao Manipur, izay mametra ny sisin'i Myanmar. Milaza ireo mpanao lalàna fa natao hitazonana ireo “avy any ivelany”, toy ireo mpifindra monina, mba tsy hanori-ponenana eo amin'ny fanjakana ireo lalàna ireo. Ireo vondrona fiarahamonim-pirenena milaza fa mametra ny zon'ireo vondrom-piarahamonina avy amin'ny foko vitsy an'isa ao Manipur ireo lalàna ireo, indrindra fa ny vahoaka Naga, izay araka ny tantara dia niaina tamin'ireo lafy roa amin'ny sisintanin'i India sy Myanmar.
Nitatitra ny Times of India fa nolazaina ho “hanarahana maso ny fiparitahan'ireo tsaho izay mikendry hampisy korontana” ilay fibahanana ny Aterineto sy ireo tolotra amin'ny finday. Nanomboka ny 1 Septambra ilay fibahanana ary notaterina ho nifàrana ny 9 Septambra.
Toa miseho ho ampahan'ireo fironana mampiahiahy io: Vao herinandro nialoha ilay fitroaram-bahoaka, nibahana ny fidirana tamin'ny Aterineto sy tolotra fandefasana hafatra amin'ny finday ireo manampahefan'ny fanjakan'i Gujarat, tafiditra amin'izany ny WhatsApp, taorian'ireo fitroaram-bahoaka nahafatesana olona. Nitaraina ihany koa ireo mpikatroka mafana fo ao Manipur fa teo aloha, nakatona tamin'ny fomba tsy ofisialy ny fifandraisana, indrindra noho ny hetsika betsaka nataon'ny miaramila izay naharitra ela tao Manipur, noho ny fifandonana eo amin'ny samy vondrom-piarahamonina tao amin'ny faritra. Nilaza ihany koa ireo mponina eo an-toerana fa manasarotra ireo ezaka fizaràna fanampiana taorian'ny tondradrano ny fahatapahan'ireo fifandraisana.
Voasivana tsy afaka alefa intsony any Shina ireo kisarisary Sahona, elo, ary Winnie Ilay Bera
Nahatonga ireo Shinoa mpanivana hiasa mihoatra ny fotoana ara-dalàna ny matson'ireo miaramila maro nanamarika ny faha-70 taonan'ny niondrehan'i Japana nandritry ny Ady Lehibe faha II. Nofintinin'i Vivianne Zeng avy amin'ny Hong Kong Free Press tao amin'ny bilaogy iray ireo lahatsoratra sy kisarisary tena tratry ny fanivanana be indrindra tamin'ity herinandro ity, izay ahitana ireo sahona, elo, Kim Jong-un, ary ireo sarin'i Winnie ilay Bera, izay matetika ampitahain'ireo mpisera amin'ny Aterineto amin'i Xi Jinping.
Amin'ireo vaovao hafa avy any amin'ny tanibe Shina, nanomboka nampiharin'ireo orinasan-tserasera ny fitspika mitaky ireo mpampiasa finday mba hanoratra ny tena anarany sy ny laharana famantana azyy ho fanarahana ny didy navoakan'ny Ministeran'ny Fampahalalàm-baovao sy ny Teknolojia tamin'ny voalohandohan'ity taona ity. Mety haato ny laharan'ireo mpampiasa izay tsy manoratra ny anarany alohan'ny 1 Septambra izay fe-potoana farany, na dia nilaza aza ireo oriasan-tserasera fa “tsy mora” ny manao izany noho ny hamaroan'ireo mpampiasa azy.
Enina ambinifolo volana taorian'ny nisamborana azy ireo, mbola miandry ny hitsaràna azy ihany ireo Etiôpiana efatra mpitoraka bilaogy
Efatra amin'ireo mpitoraka bilaogy Zone9 (faritra9) ao Etiôpia, izay nampangaina amin'ny alalan'ny fanambaràna miady amin'ny fampihorohoroana ao Etiôpia, ary naiditra am-ponja hatry ny volana Aprily taona 2014, no mbola miandry ny fitsaràna azy ireo hatrany. Na teo aza ny zava-nitranga hoe nafahana ny dimy tamin'ireo namany ary nesorina daholo ireo fiampangàna rehetra taminy ny volana Jolay, ny efatra nentina teo amin'ny fitsaràna ny 7 Septambra fotsiny mba hahazo fanemorana ny fitsaràny indray ho any amin'ny volana manaraka hafa indray. Niseho teo amin'ny fitsaràna fotsiny izy ireo mba hahazo fanemorana fanim-37 ny raharahan'izy ireo, ary nandany 500 andro tany am-ponja.
Asain'i Rosia manangona ireo angon-drakiny ao an-toerana
ireo orinasa avy any ivelany (afa-tsy ny Twitter)
Takian'ny lalàna vaovao iray vao napetraka ireo orinasanà teknolojia rehetra manana Rosiana mampiasa azy mba hametraka ireo milina mpandrakitra azy ho ao an-toerana mba hanangonana ireo angon-drakitry ny Rosiana mpanjifa. Miantefa amin'ireo orinasa rehetra ilay lalàna fa misy fiantraikany mafy manokana amin'ireo mitoetra any ivelan'i Rosia. Raha afaka lazaina fa hiaro bebe kokoa ny fiainana manokan'ireo mpampiasa io hetsika io, amin'ny fanarahamason'ny olona hafa (toy ny governemanta hafa), manamora ny asan'ireo Rosiana mpampihatra lalàna ihany koa io hiditra amin'ireo angon-drakitry ny mpampiasa, izay teo aloha mety hoe nangonina tany amin'ny milina mpandrakitra tany ivelan'ny firenena.
Niresadresaka manokana tamin'ireo Rosiana mpanao lalàna ny Google, Facebook ary Twitter mba hampahazava ny hevitr'ireo lalàna vaovao, fa tsy mbola mazava tsara hatreto hoe hanaraka ireo sa tsia ry zareo. Hatreto aloha, milaza ireo Rosiana tomponandraikim-panjakana fa tsy mahakasika ny Twitter ilay lalàna vaovao fametrahana eto an-toerana ny angon-drakitra, tamin'ny fanamafisana fa tsy mandrakitra ny heveriny ho angon-drakitry ny mpampiasa ireo tolotra ireo. Fa mety hipoitra ihany ny fisian'ny resaka tsiambaratelo mankany amin'izay hifanarahana any aoriana. Araka ny notsipihan'i Andrei Soldatov, Rosiana mpanao gazety : “Raha toa ka manaiky ny hiresaka miafina ireo orinasa lehibe manerantany, hieritreritra ireo manampahefana Rosiana fa vonona ny hifanaraka amin'ny lafiny mahamay izy ireo.”
Miverena miaraka amin'ny didy fanomezan-dàlana, mpampiasa ‘stingray’
Nilaza ny Ministeran'ny Fitsaràna Amerikana fa mitaky taratasy ara-dalàna avy amin'ireo olona mpampihatra lalàna mampiasa ireo fitaovana “stingray” ry zareo, fitaovana izay manangona sy manaramaso angon-drakitra avy amin'ireo finday manodidina amin'ny fangalàna tahaka ny tilikambo avon'ny finday. Raha toa ka misy ny dingana lehibe mametra ny fahafahan'ny fanarahamason'ireo mpampihatra lalàna, mihatra amin'ireo masoivoho federaly fotsiny ihany ireo lalàna ary tsy hikasika ireo masoivoho mpampihatra lalàna eo an-toerana raha tsy hoe tafiditra amin'ny asa miaraka amin'ireo manampahefana federaly izy ireo. Nahita masoivoho 54 ao anatin'ireo fanjakana miisa 21 mampiasa io fitaovana io ny ACLU.
Nandray anjara tamin'ity tatitra ity i Lisa Ferguson, Weiping Li, Subhashish Panigrahi, Inji Pennu, Ellery Roberts Biddle, Kevin Rothrock, ary Sarah Myers West.
Misoràta anarana ao amin'ny Netizen Report amin'ny alalan'ny mailaka
31 Jolay 2021Azia Atsimo